Ingoma kaDavido isiphenduke ingoma yezwe laseNigeria | Scrolla Izindaba
Ingoma kaDavido isiphenduke ingoma yezwe laseNigeria
Ingoma yesihlabani somculi uDavido ethi-Fem, isiphenduke ingoma yezwe kwintsha yase-Nigeria ebiyicula emigwaqeni ngenkathi ibhikisha ngesihluku samaphoyisa.
Ababhikishi be-#EndSARS sebekhombise isikhathi esingaphezu kwesonto bephikisana namaphoyisa anonya futhi akhohlakele, abizwa nge-Special Anti-Robbery Squad.
Uhulumeni kaMengameli uMuhammadu Buhari uvumile ukulususa lolu phiko, ebese ebeka uphiko olusha olubizwa nge-Swat.
Kepha ababhikishi bathi sebenele futhi bayangabaza ngalolu phiko olusha. Bafuna kuphele konke ukuhlukunyezwa ngamaphoyisa ezweni.
Kushone okungenani abantu abayishumi kule mibhikisho, kanti iqulu lezigelekeqe lahlasela umbhikisho onokuthula enhlokodolobha yase-Abuja ngoLwesithathu, lashaya ababhikishi.
Emibhikishweni enqamule izwe lonke, intsha isihlanganyele ekuculeni iculo lomdlandla elithi-Fem, elibonakala likuphula umoya wentsha.
Izinhlobo eziningi zamavidiyo entsha ecula le ngoma, athunyelwe ezinkundleni zokuxhumana.
UDavido uqobo ubephakathi kweqembu labaculi base-Nigeria okubalwa kubo uTiwa Savage, uBurna Boy, uWizkid, uDon Jazzy kanye noLady Donli abeseka le mibhikisho.
UDavido, ogama lakhe langempela nguDavid Adedeji Adeleke, ungomunye wezihlabani ezinkulu eAfrika namuhla – futhi isitayela sakhe sigqugquzelwe kakhulu yintsha yase-Nigeria.